October 2012 ~ IT Guide Myanmar
SFXMaker 1.2.1 RC1 ကိုသုံးပြီး ပရိုဂရမ်တွေကို Auto Selint Install လုပ်ကြည့်ရအောင်
ဒီပရိုဂရမ်လေးကတော့ မိမိတို့ကွန်ပြူတာမှာ ဝင်းဒိုးတင်ပြီးရင် ပရိုဂရမ်တွေဆင်တဲ့အခါမှာ
တဆင့်ခြင်း နှိပ်နေစရာမလိုပဲ အချိန်ကုန်သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ပထမဦးဆုံး SFXMaker လေးကို ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ ။
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ဖိုင်ကို Rar ဖြည်လိုက်ပါ ။ အောက်ကပုံအတိုင်းရမှာပါ ။
SFXMaker_1.2.1_RC1_installer ကိုနှိပ်ပြီး အောက်ကပုံတွေအတိုင်းအဆင့်ဆင့် Install လုပ်သွားလိုက်ပါ ။
အပေါ်ပုံမှာ Lunch SFXMaker ကို မရမ်းသေးပဲ Finish ကိုနှိပ်ပါ ။
ပြီးရင်တော့ ခရက်(က်)ဖိုင်လေးကိုရမ်းပေးလိုက်ပါ ။
ဒါဆို SFXMaker_1.2.1_RC1 ကိုအသုံးပြုဘို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ ။
(၁) SFXMaker ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ။
(၂) မိမိ Install လုပ်ချင်တဲ့ ပရိုဂရမ်ဖိုင်ရွေးပေးဘို့အတွက် ပုံပါနံပါတ် (1) အတိုင်း Installer Path
(၃) နံပါတ် (2) အတိုင်း အလိုရှိရာဖိုင်ကိုရွေးပေးပါ ။
(၄) နံပါတ်3မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Silent Switches ကိုနှိပ်ပါ ။
(၅) အောက်ကပုံအတိုင်း မိမိဖိုင်ကို သိမ်းရန် နံပါတ် -4ကိုနှိပ်
(၆) icon တွေစိတ်တိုင်းကျပြောင်းနိုင်ရန် -5ကိုနှိပ်
(၇) ပြီးရင်တော့ Create ကိုနှိပ်ပြီး ပရိုဂရမ်အလုပ်လုပ်တာကိုပြီးအောင်စောင့်
(၈) Exit ထွက် ။
Windows7အသုံးပြုသူများအတွက် Shortcut Icon ပြသနာအကျယ်ရှင်းလင်းချက်
Wednesday, October 31, 2012 Ithelper 1 comment
အမေး= အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကWindows7သုံးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုဘာနှိပ်လိုက်မိသလဲ မသိဘူး..Desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့Icon မှန်သမျှက Windows Media Player ပုံတွေချည်းဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ Folder တွေကလွဲပြီးဘားမှဖွင့်မရတော့ပါ။ ဆိုင်သွားပြတော့လဲ Virus ကိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တာ..Windows ပြန်တင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်..အရေးကြီးတဲ့Data တွေရှိတဲ့အတွက် Windows ပြန်မတင်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာ..အခုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းရှိပါသလား..ပီးတော့ ကျွန်တော့်လိုမျိုးဘဲ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကွန်ပျူတာတွေမှာလည်းဖြစ်နေပါတယ်..ဖြေရှင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ဖြေရှင်းပေးပါ..ပြီးတော့ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း အစ်ကိုတို့သိမယ်ဆိုရင်ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
လေးစားစွာဖြင့် - ၀ါးခယ်မသား (ဧရာဝတီတိုင်း)
အဖြေ = ဟုတ်ကဲ့..အခုညီလေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲကို အစ်ကိုတို့အနေနဲ့ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်..အခု အဲဒီ Icon တွေအကုန်လုံး Windows Media Player ပုံတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတာအရင်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။အဓိက လက်သည် တရားခံကတော့Program တစ်ခုပေါ်ကို Right Click ထောက်ရင်ပေါ်လာတဲ့ OpenWith ဆိုတဲ့ Menu ကြောင့်ပါဘဲ။
Desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့Software တွေရဲ့ Icon ကို Right Click ထောက်ပြီး Open With ကိုနှိပ်ကာ Program တစ်ခုကို ရွေးချယ်မိလိုက်သောကြောင့်..Icon တွေအကုန်လုံးဟာ ရွေးချယ်ထားတဲ့ Program ပုံတွေဖြစ်ကုန်တော့တာပါဘဲ..ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်
(၁) Windows7ရဲ့ Registry မှာ Shortcut Icon ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု အားနည်းနေခြင်း(Exploit)
(၂) အသုံးပြုသူရဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုမရှိခြင်း..ဥပမာProgram Icon မှန်းမသိ.. Folder or Files မှန်းခွဲခြားမသိမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ အချက် နှစ်ချက်မှာ ဒုတိယအချက်ကို မပြောတော့ပါဘူး..ပထမအချက်ကိုဘဲပြော
ပြပါ့မယ်..အခု ညီလေးဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာမျိုးက Windows7တွေမှာဘဲဖြစ်တာပါ..တစ်ချို့က ဒီလိုဖြစ်တာဟာ Virus ထိတာလို့ပြောကြပါတယ်..(ဒါလုံးဝမမှန် ရမ်းရွှီးတာပါ)…တစ်ချို့ကလဲ
ဒီလိုဖြစ်ရင် System Restore ပြန်လုပ်လိုက်ကြပါတယ်..ခဏတာတော့ ကောင်းသွားပါရဲ့..မကြာပါဘူး ဖြစ်မြဲက ဖြစ်မြဲအတိုင်းပါဘဲ။ ဒီတော့ Open with လုပ်တိုင်း ဒီ Program Icon တွေက အကုန်ပြောင်းနေတော့မှာပါဘဲ..ဒါကတော့ Windows7ရဲ့အားနည်းချက်ပါ။Microsoft က သူ့ရဲ့ ထုတ်ကုန်အားနည်းချက်ကို ပြုပြင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ Registry Code တစ်ခုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်..ဒါကို အသုံးပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့်Program ပေါ် Right Click ထောက်ပြီး Openwith လုပ်မိတဲ့အခါမှာ Icon တွေအကုန်လုံးက ဘားမှပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး..ဒါကြောင့် ဒီလို အဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအဖို့
ကျနော်က ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Registry Code တွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရင်ကလည်း တင်ပေးဖူးပါတယ်..အခု မေးခွန်းကိုသေချာမေးလာတဲ့အတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့အားလုံးသိ အောင် အကျယ်ရှင်းပြလိုက်တာပါ..ဒီလိုWindows7မှာဖြစ်နေတဲ့ Icon ပြောင်းလဲခြင်းပြသ နာကို ကွန်ပျူတာ Services ဆိုင်တော်တော်များများကVirus ဟုအကြောင်းပြကာ ၀င်းဒိုးစ် ပြန်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်…ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်တာပါ..၀င်းဒိုးစ် တစ်ခါပြန်တင်ရင်လဲ ငါးထောင် ဒါမှမဟုတ် ရှစ်ထောင်လောက်တောင်းနေတာပါ..ကိုယ်တိုင်တင်တတ်တဲ့သူတွေ အတွက်လဲ ပြန်တင်စရာမလိုဘူး..ဒီလိုကောင်းအောင် ပြန်လည်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာ အချိန်ကုန်သက်သာစေချင်လို့ရှင်းပြပေးတာပါ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ ဒီလိုအဖြစ်အပျက် မျိုးကြုံလာခဲ့လို့ရှိရင်လည်း စေတနာနဲ့အနည်းဆုံး နှစ်ထောင်လောက်တောင်းပြီး ကူညီပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ (ပညာခတောင်းခိုင်းတာနော် :P) .. ကဲ..ဆက်ကြည့်ပါဦး..။
ကြိုက်ရာ Link ကနေ Registry Code ကို Download ချပါ။
Download ==> Mediafire ၊ 4shared
Download ချလို့ရလာတဲ့ဖိုင်ထဲက Amc.bat ကိုအရင်နှိပ်ပါ။ အမည်းရောင် Box လေးဖျက်ခနဲ့တက်လာပြီး ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတာနဲ့ Exe.reg ကိုClick ပါ။
Yes or No မေးရင် Yes ပေးလိုက်ပါ။ Error တက်လာရင် OK ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။ စက်ပြန်တက်လာတာနဲ့ Desktop ပေါ်မယ်ရှိတဲ့Icon တွေဟာ မူလ Program Icon တွေအတိုင်းပြန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအပေါ်ကို Right Click >> Open With လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦး… အခြားProgram တွေပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ…။ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ Icon တွေပြောင်းလဲကုန်တဲ့ ပုံတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
Icon တွေပြောင်းကုန်တာကို Virus ထိတယ်ဆိုပြီး Windows အသစ်ပြန်တင်ကာ လုပ်စားနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ Computer Services ဆိုင်အချို့ရဲ့ စီးပွားရေးကိုတုတ်နဲ့ ထိုးသလိုများဖြစ်ခဲ့ရင် Mailserver.npt@gmail.comသို့ဆက်သွယ်ကြပါကုန်. :D
ဒီနေ့တော့ ဆော့ဝဲလေးတွေဘက်လှည့်ပြီး Corel Painter v12.2.0.703 partable
လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဖိုင်ဆိုဒ် 140 mb ပဲရှိလို့ မခွဲပေးတော့ပါဘူး ။
အောက်မှာ CD key ထည့်နည်းလေးပါပြထားပေးပါတယ် ။
လိုချင်သူများ ဒီပို့(စ်)ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ Down လိုက်ကြပါခင်ဗျာ ။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ ပါခင်ဗျာ ။
ခုကျနော် ကြိုတင်အစီရင်ခံချင်တာကတော့ ကျနော် နောက်ထပ်တင်မယ့် ပို့(စ်) ခေါင်းစဉ် ကို
အောက်မှာပေးထားပါတယ် ။ ဖတ်ကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားတယ် ကြိ်ုက်တယ်ဆိုရင် (ပို့(စ်)ခေါင်းစဉ်ပါ အကြောင်းအရာကိုပြောတာနော်-တလွဲတွေးမနေနဲ့အုံး)...နောက်တာနော်...
Comment လေးတွေပေးကြဘို့ပါ ။ ကျနော့ကို ကူညီတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာ ။ ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်
ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ - ဆိုးတယ်ဆိုရင်လည်း ပြင်ရတာပေါ့
ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ပီတိတွေဖြစ်ရတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား........
Hiern's Boot CD အသုံးပြုပုံနှင့် Window တင်နည်းများ
Ghost auto Driver All Chipt & All MainBoard
10 ဦးထက် မနည်းစေနဲ့နော်....ဟဲဟဲ....(နောက်တာပါဗျာ- Comment မပေးလည်း တင်မှာပါပဲ)
အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေများ “ အားလုံးမင်္ဂလာပါ”
ဒီနေ့တော့ 3D ဖိုတိုဆလိုက်ရှိုးတွေ ၊ Precentation တွေ ၊
Wedding Title & Photo Show တွေ Family Photo Show တွေကို
လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဗီဒီယို တည်းဖြတ်လုပ်ငန်းသမားတွေအတွက်တော့ မရှိရင်မဖြစ် လို့တောင် ပြောရမှာပါ ။
ကျနော်ကိုတိုင်လည်း အမြဲသုံးနေတဲ့ ပရိုဂရမ်ပါ ။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့နည်းနည်းကြီးတယ် ။ 1.85 GB ရှိတယ် ။
ကြီးဆို သူလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကလည်း တော်တော်လေးများပြီးစုံပါတယ်
ခုပြန်တင်ပေးတာတော့ (၁)ရက်လောက်ကြာတယ် ။ ကျနော် အပိုင်း(10)ပိုင်းခွဲပြီး
Mediafire မှာတင်ထားပေးပါတယ် ။
တစ်ပိုင်းကို 190 mb နဲ့ အားလုံး (9)ပိုင်း နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ 59 mb ပဲရှိပါတယ် ။
မြန်မာပြည်ကနေဆိုရင်တော့ မလွယ်ဘူး ခုချိန်မှာ အခက်အခဲရှိပေမယ့်လည်း နောက်ဆိုပြေလည်သွားမှာပါ ။
ကဲလိုချင်သူတွေ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ကြပါ ။
ဒီပရိုဂရမ်ကို Install လုပ်ရင် XP SP3 နဲ့ 7-32 bit သမားများအတွက်
ဒါပေမယ့် Win7(64)bit သမားများအတွက်တော့ program ဖိုင်နှစ်ခုရှိနေတာကြောင့်
ဖိုင်းလမ်းကြောင်းတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်နေသူများအဖို့ အခက်အခဲမရှိပေမယ့် ။
ကျနော့အတွေ့အကြုံအရ များသောအားဖြင့် တော်တော်လေးကို အခက်ကြုံနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်
အဓိက သတိထားရမယ့် အချက်ကတော့ မိမိ Install လုပ်လိုက်တဲ့ 3D Album CS နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ program တွေအားလုံး 3D Album CS -Folder အောက်မှာ တစ်စုတဝေးတည်းရှိနေဘို့ပါပဲ ။
ဒါကြောင့် Install လုပ်ပုံ အသေးစိတ်ကို ကျနော် VDO ဖိုင်လေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ် ။
ရိုးရှင်းပြီး hack စရာမလိုတဲ့ သာမန်လေ့လာလိုက်စားလိုသူ မည်သူမဆို လုပ်လို့ တတ်မယ့်နည်းပါ ။
ဒါဆိုရင် အခက်အခဲ မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
အကယ်၍ ရှိခဲ့ရင်လည်း konainga2@gmail.com,c-box တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ။
ကျနော်သိသလောက် အိတ်သွန်ဖါမှောက် ပြန်ပြီး Share ပေးမှာပါ ။
ကဲအောက်မှာကြည့်လိုက်ကြပါနော် ။ တစ်ခုတော့မှာလိုက်မယ်နော်
hack တဲ့နည်းကိုသုံးချင်တဲ့သူတွေကတော့ အောက်ကနည်းကိုကြည့်ပေါ့ဗျာ ။